खै कहाँ छन् नर्सको हकहितमा बोल्नेहरु? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
रस्मिला थपलिया शनिबार, वैशाख १८, २०७८, १९:१२:२३
कोरोनाको लहर बढेसँगै सबै अस्पतालमा नर्सिङ कर्मचारीको आवस्यकता पर्दछ। सबै अस्पतालले यति जना नर्स चाहियो भनेर विज्ञापन निकाल्छन्। बेरोजगार नर्स दिदिबिहिनीहरुले आवेदन पनि दिन्छन्। यस्तो समयमा कामको अवसर त मिल्छ तर कि त न्यून तलबमा कि त आन्तरिक सहमतिमा कति महिने करार मा हो। नखाउँ भने दिनभरीको सिकार खाउँ भने कान्छो बाउको अनुहार भने जस्तो छ। अस्पताललाई पैसा कमाउनु छ। थोरै तलबमा काम लगाएर धेरै आम्दानी गर्नु छ। नर्सलाई जागिर चाहिएको छ किनकी बेरोजगार बस्नु भन्दा थोरै तलब लिएर जोखिम मोल्न तयार छन्। कोरोनाको पहिलो चरणमा जस्तै आफ्नो स्वार्थ पुरा भएपछि भकाभक नर्सिङ कर्मचारी निकालिन्छन्। सोझो अर्थमा भन्नु पर्दा 'युज एण्ड थ्रो' यसको बारेमा बोलिदिने हाम्रो लागि कुनै निकाय छैनन्। न सरकार छ, न हाम्रो भनिने कुनै संघ सस्था ले नै बोल्छ। यहाँ नर्सको लागि भनेर खोलिएका संस्थाहरु त झन् कहाँ के गरिरहेका छन् अत्तोपत्तो नै छैन। यहाँ कति नर्स श्रम शोषणमा परेका छन्, कुन अस्पतालले कति तलब दिएको छ, कसले भत्ता दिएको छ, को नर्स साँच्चै अप्ठ्यारोमा परेका छन् भन्ने कुराको बारेमा कहिले चासो दिएको जस्तो लागेन। खाली दलको फेरो समातेर कुदेको मात्र देखिन्छ। नर्सहरु आफैँ काम गरे गर्छन् मरे मर्छन् हामीलाई के को चासो भन्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन्। यहाँ अरु श्रम शोषणमा परेको कसलाई के मतलब छ र!
कोभिड वार्डमा कार्यरत नर्स भन्छिन्- मृत्यु संख्या छिट्टै कम भइदिए हुन्थ्यो लामो समय पिपिइ लगारहँदा श्वास फेर्न गाह्रो हुन्छ। अरु समयमा शरीर दुख्ने, थकाइ लाग्ने भइरहन्छ, जसको कारण अहिलेपनि संक्रमित छु झै लाग्ने रहेछ। कमजोरी अनुभव भइरहेको हुन्छ। २१ घण्टा पहिले
नेतृत्वका लागि आवाज: भावी स्वास्थ्य सेवामा नवीन दृष्टिकोण घरभाडामा बस्ने डाक्टर, नर्सहरुलाई संक्रमण सारेको आरोपमा घरबाट निकाल्ने, तल्लो स्तरको गाली गलौज गर्ने समेत देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार ३८ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरु विश्वमा शारीरिक तथा मानसिक यातनाबाट कार्यक्षेत्रमा पिडित भएका छन्। बुधबार, वैशाख २९, २०७८
निषेधाज्ञाका समयमा बिरामीलाई टेलिमेडिसिन सेवा दिँदै नेपाल हेल्थ कर्प्स ४३ मिनेट पहिले